Photo Source : The Himalayan Times
फूल व्यवसाय सुरु गर्न बढी लगानी पनि नलाग्ने तथा यसको बजार पनि निकै राम्रो भएको हुनाले यस व्यवसायप्रति युवाहरूको आकर्षण बढेको देख्न सकिन्छ। चाडपर्वमा माला बनाउन, सजाउन, कसैलाई स्वागत गर्न, बिदाइ गर्न, उपहार दिन फूलको प्रयोग गर्ने गरेको भेटिन्छ। फुल व्यवसाय सुरु गर्ने हो भने देशमै बसेर जीवन राम्रो सँग चलाउन त्यति गार्हो नपर्न सक्छ।
व्यवसाय सुरु गर्नु अघि कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ?
जुन फूलको व्यवसाय सुरु गर्न लागेको हो, त्यसको बजार
आफूले कति लगानीमा, कत्रो व्यवसाय गर्ने ?
व्यवसाय सञ्चालन गर्ने ठाउँ
फूल उत्पादन गर्ने जग्गा र कति फूल उत्पादन गर्ने ?
आवश्यक सामान के के हुन सक्छन् र कसरी जुटाउने
सिचाई तथा उत्पादनको लागि प्रविधिको प्रयोग
कति लगानी लाग्छ?
फुल व्यवसायमा लाग्ने लगानी आफूले उत्पादन गर्ने फूलको किसिममा भर पर्छ। जस्तै: बेमौसमी फूलको उत्पादन गर्ने हो भने मौसमी फूलको तुलनामा बढी लगानी लग्न सक्छ । यस्ता फूलको उत्पादनका लागि ग्रिन हाउस बनाउनु पर्ने हुन्छ जसमा लगानी बढी पर्न जान्छ। प्रविधिको बढी प्रयोग गर्नु पर्ने भएकाले बेमौसमी फूलको उत्पादन गर्दा ५० देखि ६० लाखसम्म लगानी गर्नुपर्छ। त्यस्तै मौसमी फूलहरु जस्तै सयपत्री, ग्ल्याडिओलास, ट्युबरोस जस्ता फूलको उत्पादन गर्ने हो भने एक लाख देखि ३ लाखको लगानी भए पुग्छ।
कस्ता फूलहरु बढी बिक्री हुन्छन्?
सामान्य समयमा हो भने रोज, लाहुरे, डाहलिया, गोदावरी, जर्बेरा, पटुनिया, हेज, कार्नेसन, ग्ल्याडिओलास, बगानबेली आदिजस्ता फूलहरुको बिक्री बढी मात्रामा हुने गरेको पाइन्छ। चाडपर्वमा हो भने छुट्टै किसिमका माग हुन्छन्। तिहार हो भने सयपत्री तथा मखमलीको माग बढी हुन्छ। त्यसैगरी हिजो आज भ्यालेंटाइन डे अर्थात् प्रेम दिवसका दिन ‘रोज’ गुलाफको माग अत्याधिक हुने गरेको भेटिन्छ।
कहाँबाट तालिम लिने?
फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालद्वारा (FAN) पुष्प व्यवसायसम्बन्धी तालिम दिईदै आएको छ। व्यवसाय सुरु गर्नका लागि यो तालिमले निकै सहयोग पुर्याउछ। सम्पर्कका लागि दिइएको नम्बरमा डाइल गर्नुहोस्: 01-5261089 त्यस्तै CTEVT बाट मान्यताप्राप्त तालिम दिने संस्थाबाट पनि यसको तालिम लिन सकिन्छ । त्यसैगरी हिजोआज त त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मास्टर्स डिग्री कार्यक्रममा ‘फ्लोरिकल्चर’ बिषय पनि समावेस गरि अध्यापन हुने गरेको छ ।
कस्ता फूलहरु रोप्ने र कसरी?
बार्हैमास हरियो देखिने सदाबहार फूलहरु जस्तै जीरेनियम रोप्नु राम्रो हुन्छ। यस्ता फूलहरुलाई जुन मौसममा पनि फुलाउन सकिन्छ। मौसमी फूलहरु पनि रोप्न सकिन्छ तर कुन मौसममा कुन फूल रोप्ने भन्ने जानकारी हुनु आवश्यक छ। बिरुवाका लागि भने आफैले बीउ बिजन राख्न सकिन्छ अथवा नर्सरीबाट पनि ल्याउन सकिन्छ।
फूल रोप्दा मलिलो माटोको छनौट गर्न आवश्यक हुन्छ। पर्याप्त जमिनको व्यवस्था गरेर फूलहरु रोप्न सकिन्छ। माटोमा मल मिसाएर बिरुवा रोप्न सकिन्छ। फूल रोपिसकेपछि त्यसको राम्रो रेखदेख गर्न जरुरी हुन्छ। उचित समयमा सिचाई गर्ने, मल राख्ने, गोडमेल गर्ने, झार उखल्ने तथा किरा फट्यांग्राबाट जोगाउने काम निरन्तर रुपमा गरिरहनु पर्छ।
यसको व्यावसायिक सम्भावना कस्तो छ?
अहिलेको समयमा दुख साट्न होस् या खुसी बाढ्न होस् फुल जहाँ पनि अपरिहार्य देखिन्छ। कुनै उद्घाटन समारोहमा जानुहोस् फूलमालाले समारोहको रौनक बढाइरहेको हुन्छ। हरेक चाडपर्व फुल बिना अपुरो हुन्छ। स्वागत कार्यक्रम देखि बिदाइसम्मका गतिविधिहरूमा फूलको निकै धेरै आवश्यकता पर्छ। यसो भएको हुनाले पुष्प व्यवसाय नेपालमा दिनानुदिन फस्टाउँदै छ।
हरेक महिना कुनै न कुनै चाडपर्व परिरहने र अझ हिजोआज त बर्षे भरि बिवाह, ब्रतबन्ध, पुराण आदी कर्महरु परिरहने हुदा नेपाली समाजमा फूलको बिक्री गर्न खासै गाह्रो पर्दैन। हिजोआज ३०-३५ थुँगा सयपत्री फूलको एउटा माला बनाएर बेच्ने हो भने कम्तिमा ६० रुपैया देखि बढीमा १०० रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको भेटिन्छ। यसो हुँदा माला बनाएर बेच्दा पनि मनग्ये आम्दानी गर्न सकिन्छ।
यसका लागी विभिन्न तरिकाहरू अपनाउन सकिन्छ। जस्तै बिशेष गरेर सयपत्री, गोदावरी जस्ता फूलहरुलाई कुनै मठमन्दिर अगाडी एउटा नांग्लोमा फिजाएर बर्ष भरि नै भक्तहरू माझ पुर्‍याउन सकिन्छ भने साइकल वा ठेलामा डुलाएर पनि यसको बेचबिखन गर्ने गरेको प्रशस्त भेटिन्छ।
त्यस्तै अन्य फूलहरु भने स्थानीय स्तरमा आफैले एउटा सानो पसल खोलेर पनि बेच्न सकिन्छ । पसलमै बसी राम्रा राम्रा बुके बनाएर बेच्ने, वा विवाहको कार सजावट गरिदिने हो भने पनि यसको बजार निकै राम्रो देखिन्छ। साथमा सजावटमा सहयोग पुर्याउन एकजाना कर्मचारी राखी कुनै सभा, सामाजिक समारोह, विवाह वा कुनै धार्मिक कार्यक्रमहरुमा कार्यक्रम स्थल मै गइ सजावटको सुविधा दिने हो भने झन धेरै कमाइ गर्न सकिन्छ । सप्लायर्सहरुसँग अथवा खरिद गर्ने व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क गरेर पनि माग अनुसारको फुल पठाउन सकिन्छ।
आजकाल हरियाली, बागबगैंचा देख्दा फोटो खिच्न मन पराउने र साथीभाईसँग रमाउने, व्यक्तिहरु प्रशस्तै भेटिन्छन्। फूल खेती गरेको ठाउँमा एउटा सानो चिया-नास्ता पसल खोल्ने र इन्ट्री फी नै राखेर मानिसहरुलाई प्रवेश गराउने हो भने पनि रमाइलो खोज्ने ग्राहकहरु आकर्षित हुन समय लाग्दैन। त्यसैले फूल खेती वरिपरि एउटा होमस्टे खोल्ने हो भने पनि पर्यटकहरुको राम्रो आगमन हुने सम्भावना देखिन्छ।
स्रोत: यो लेख फुल व्यवसायसम्बन्धी इन्टरनेटमा पाइएका विभिन्न सामाग्रीहरू अध्ययन गरी तयार पारिएको हो।
ब्रोइलर पालन- घरमै बसी लाखौ आम्दानी गर्न सकिने...
ब्रोइलर एउटा कम समयमा मासु उत्पादन गर्ने...
तुलसी खेती: थोरै लगानीमा धेरै आम्दानी हुने व्यवसाय
तुलसी हाम्रो घरआँगनमा लगाइने अत्यन्तै गुणी बिरुवा...
यसरी गर्नुहोस् बाख्रा पालेर देशमै राम्रो आम्दानी!
स्वदेशमै उद्यम गर्न इच्छुकहरूको लागि बाख्रा पालन...
मोरिङ्गा अर्थात् सजिउन - स्वास्थ्य र व्यवसाय दुवैका...
के हो मोरिङ्गा ? मोरिङ्गा हिमालयको दक्षिण भेगमा...